Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa dhaddacha irratti kallattiin akka hiikaman erga ta’ee booda, deebifamanii hidhaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa dhaddacha irratti kallattiin akka hiikaman erga ta’ee booda, deebifamanii hidhaman.
Manni murtii walii gala Oromiyaa olmaa dhaddachaa har’a ooleen Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa dhaddachuma sanarratti biliisa baasuun, kallattiin gara mana isaanii akka galuu danda’an ajaja dabarsuus poolisiin ajaja cabsuun humnaan hidhamtoota sana butuu OMN odeeffate.
Hidhamtootni siyaasaa kunniin bu’ura ajaja mana murtiichaatiin abukaatoofi maatii waliin mooraa mana murtii keessa ba’anii utuu hin fagaatin, poolisii humna addaa Oromiyaatiin deebifamanii butamuun fidhatamuu isaanii Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan OMN-tti himaniiru.
Akka Obbo Guddanneen jedhanitti, Manni murtii walii gala Oromiyaa dhaddacha har’a oolerratti, Koomishiinerri Koomishiinii poolisii Oromiyaa Obbo Araarsaa Mardaasaa akka dhihaatee deebii kennuuf eegamus, Koomishiinichi yeroo sadaffaaf ajaja mana murtii diduudhaan dhaddachatti osoo hin dhihaatin hafee jira.
Koomishiinichi akkaataa ajajameen dhihaachuu baatus, guyyaa har’aa hidhamtoota siyaasaa Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa mana murtiitti akka dhihaatan taasiseera. Manni murtiichaas, ajaja Bitootessa 16, 2021 dabarse irra deebiin mirkaneessuun, hidhamtoonni kun kallattiidhaan dhaddacharratti biliisa akka ba’an murteessuun gara mana isaaniitti akka galan ajaje ture.
Poolosiin isaan fidee dhufe, sagalee dhaddacharratti dhageessiseen, ‘mallatteessee waanin fidee dhufeef, gara Moojootti isaan deebisuun qaba. Achitti gad haa lakkifaman” jechuun gaafatus, manni murtichaa duras ajaja mana murtii malee garas waan geeffamaniif, himatamtoonni kun kallattiidhaan akka dhaddacharratti hiikaman ajajuusaa abukaatoon isaanii Obbo Guddanneen himanii jiran.
Maatiifi hiidhamtoonni kun miira gammachuudhaan murticha fudhatanii, mooraa mana murtii keessa erga ba’anii booda, poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataatiin marsee isaan butee deemuudaa Obbo Guddanmee Fiqaaduu OMN-tti himaniiru.